Philips HR2726/90 Meat Mincer ~ ICT.com.mm
HomePhilips HR2726/90 Meat Mincer
Frequency: 50 Hz Speeds: 1+ Reverse Blocked power: 1700 W Nominal power: 450 W Voltage: 220-240 V Accessories included: Stainless steel screen, Knife, Kebbe maker, Sausage horn, Accessory storage tray, Meat tray,... [Learn more]
Brand: PHILIPSFilter by: Htoo Char Aung Kyaw, Meat Mincers
Accessories included: Stainless steel screen, Knife, Kebbe maker, Sausage horn, Accessory storage tray, Meat tray, Meat tray dust cover, Cleaning tool
သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်ပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အသားလုံး၊ အသားချောင်းတွေကို မိမိအိမ်မှာတင် ပြုလုပ်နိုင်စေမဲ့ Philips အမှတ်တံဆိပ် အသားကြိတ်စက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစွမ်းရည်မြင့်အသားကြိတ်စက်ကို အားကောင်းတဲ့မော်တာ၊ အသားတွေကိုရှေ့သို့တွန်းပို့ပေးတဲ့ သတ္တုဝက်အူလိမ်၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ Stainless စတီးလ်ဇကာနဲ့ ပြတ်ရှအားကောင်းတဲ့ဖြတ်ဓား တို့ဖြင့် တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ ဝက်အူချောင်း၊ ကြက်အူချောင်းလို အသားချောင်းပြုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက် 12mm နဲ့ 22mm အရွယ်အစားရှိ ကိရိယာနှစ်ခုကို ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ အသားဖြတ်ဓားကို Direction အမှန်အတိုင်းတပ်ဆင်မှသာ အသုံးပြုလို့ရအောင် ဒီဇိုင်းထုတ်ပေးထားတာကြောင့် ဓားသွားပြောင်းပြန်တပ်ပြီး အသုံးပြုမိမှာကို စိတ်ပူစရာမလိုတော့ပါဘူး။ အသားကြိတ်ပြီးချိန်မှာ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ သန့်ရှင်းရေးကိရိယာငယ်တစ်ခုလည်း ပါဝင်ပြီး အသားကြိတ်ပြီးချိန်မှာ စတီးလ်ဇကာအတွင်းသို့ ထိုးသွင်းကာ လွယ်လွယ်ကူကူ သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အသားကြိတ်တဲ့အခါမှာ 5mm နဲ့ 8mm အရွယ်အစား စတီးလ်ဇကာနှစ်မျိုး ပါဝင်တာကြောင့် မိမိနှစ်သက်ရာနဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အားကောင်းတဲ့ အသားကြိတ်စက်ဖြစ်တာကြောင့် အချိန်တစ်မိနစ်အတွင်းမှာ အသား (၂.၇)ကီလိုအထိ ကြိတ်ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
The2differently sized sausage horns allow you to create different types of results. use the 12mm for thinner results, or the 22mm one for thicker ones.
The accessory storage keeps all your Philips meat mincer accessories easily at hand.